Madaxweynaha Puntland oo Dalbaday in laga Caawiyo ka Hortagga Abaaro kusoo Wajahan |
Madaxweynaha Puntland oo Dalbaday in laga Caawiyo ka Hortagga Abaaro kusoo Wajahan
Madaxweynaha Puntland, C/weli Maxamed Cali Gaas oo kulan la qaatay hay’ado badan oo kuwa gargaarka ah oo ka howlgala Puntland, ayaa ka dalbaday in gargaar lala soo gaaro shacabka qaybo ka mid ah Puntland ku nool, kuwaasoo uu sheegay inay abaaro kusoo wajahan yihiin.
C/weli Gaas ayaa hay’adahaas kala hadlay xaalada abaareed ee ka jirta xilligan deegaanada Puntland iyo sidii wax looga qaban lahaa, maadaama laga cabsi qabo in abaaro hor leh inay ku dhuftaan Puntland.
“Runtii waxaan ugu baaqaynaa ha’yadaha samafalka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay gacan siiyaan Walaalahooda ku dhaqan Puntland oo ay kusoo Wajahan yihiin Abaaro xooggan. Abaartaasna ma ahan kuwo ay Puntland oo keliya wax ka qaban karto,” ayuu yiri madaxweynaha Puntland oo kula ka hadlay.
Sidoo kale, C/weli Gaas ayaa sheegay abaarahan ay jiri karaan illaa inta xilliga guga laga gaarayo, kaasoo uu sheegay inay dhici karto inuu billowdo sidii ay caadaduba ahaan jirtay bilaha Abriil ama May Sannadkan.
Madaxweynaha Puntland ayaa markuu kulanku soo dhammaaday wuxuu bahda saxaafadda uga waramay xaalada abaareed ee ka jirta Puntland, isagoo baaq u diray hay’adaha dhanka samafalka ah ee Caalamiga, kana dalbaday inay gacan ka geystaan Abaaraha Puntland ka.
Ugu dambeyn, C/weli Gaas ayaa sheegay in qaar ka mid ah Gobollada Puntland ay yihiin meelaha ugu daran ee ay Abaaraha saameeyeen welibana ay ka mid yihiin dhulka la filayo inay kusoo wajahan yihiin Abaaro soo fool leh.